यो हो आलिया भट्टलाई मनपर्ने सेक्स आसन ! पुरा पढ्नुहोस ! « Onlinetvnepal.com
यो हो आलिया भट्टलाई मनपर्ने सेक्स आसन ! पुरा पढ्नुहोस !
Published : 14 August, 2018 4:58 pm
उक्त अन्तर्वार्तामा आलियाले आफ्नो निजी जीवनका बारेमा कयौं खुलासा गरेकी छन् । अन्तर्वार्तामा उनले केटो साथी (प्रेमी) देखि लिएर आफूहरुबीचका सम्बन्धका गोप्य कुरा खुलेर बताइन । अन्तर्वार्ताका क्रममा आलियालाई प्रश्न गरियो यदि तपाईको प्रेमीले आफ्नो मोवाइल अनलक छोडेर गए सबैभन्दा पहिला तपाई के कुरा हेर्नुहुन्छ ? आलियाले यस्तो जवाफ दिइन, ‘मलाई मेरो प्रेमीको फोनको पासवर्ड थाहा छ ।’ यस्को मतलब अहिले उनी एक्लै छैनन् । उनको केटो साथी (प्रेमी) छ । तर उनले प्रेमीका बारेमा भने कुनै कुरा बताइनन् ।
१८ वर्षे युवासँग आफूले लामो समयमा विताउन नसक्ने आलियाको भनाइ छ । आलियाको यो भनाइबाट पुष्टी हुन्छ कि उनी परिपक्क मान्छे मन पराउछिन् । इताजाखबर